Android Application for Learning Ethical Hacking - Khit Minnyo
Unlabelled Android Application for Learning Ethical Hacking
Android Application for Learning Ethical Hacking
by KhitMinnyo on October 14, 2017
ကျွန်တော့်ရဲ့ Website ကလေးကို နေ့စဉ် လာရောက်လည်ပတ်ကြပါကုန်သော Visitor များအတွက် အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး Android Apk လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
191KB သာ ရှိတဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးထားတာမို့ မိမိတို့ရဲ့ Android တွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုပါက ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Myanmar Font အမှန်အတိုင်းမမြင်ရပါက အထက်ပါ ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ပြောင်းကြည့်နိုင်ပါသည်
Chrome Browser တွင် ကြည့်ရှုသူများကတော့ Request Desktop Site ပြုလုပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Menu များကို လျင်မြန်စွာ ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်
Blog Comment Backlinks April 30, 2022 at 1:34 AM
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanksalot for sharing. Keep blogging,	y2mate video download jio phone